Words With Friends Classic Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သူငယ်ချင်းများ Classic နှင့်အတူစကားများ
သူငယ်ချင်းများဂန္ထဝင် APK ကိုအတူစကားများ
အဆိုပါ All-တည်နေရာအသစ်-based ဦးဆောင်သူထွက်စစ်ဆေးနှင့်သင်သည်သင်၏ဧရိယာထဲမှာသူငယ်ချင်းများကစားသမားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကိုစကားမှန်လျှင်အထဲကရှာတွေ့! သငျသညျ, သင်တို့ပတ်လည်အခြားကစားသမားရန်သင့်ရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်ဂိမ်းကသူတို့ကိုစိန်ခေါ်, သူတို့နှင့်အတူ chat နိုင်အောင်ကျနော်တို့ဦးဆောင်ပေါ်တွင်သင်ထားရန်သင့် geolocation ကိုအသုံးပြုပါ။
သူငယ်ချင်းများအခမဲ့, အ #1 မိုဘိုင်းဂိမ်းနှင့်အတူစကားကစားခြင်းဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထိတွေ့ထားပါ!
Facebook က & တွစ်တာမှတဆင့်သို့မဟုတ်ကျပန်းပြိုင်ဘက်အောင်သွယ်ပွဲစားနှင့်အတူချက်ချင်းကစားရန်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖိတ်ခေါ်
• "Delightfully စွဲလမ်း။ " - GeekSugar
• "သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာလူမှုဂိမ်းကစားခြင်း။ " - Fox News
• " '' စကား '' ၏အဓိကအကြောင်းရင်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: သင်ကတက်မီးများနှင့်စက္ကန့်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတဦးတည်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ Scrabble-တူသောစကားလုံးဂိမ်းကစားနေကြတယ်။ " - TechCrunch
• "လူတွေက Android ထံသို့ လာ. ကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြကြောင်းအရှိဆုံးမေတ္တာရပ်ခံ app များအနက်။ " - Androinica
http://www.facebook.com/WordsWithFriends: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: http://twitter.com/WordsWFriends
ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတစ်ဦးက Facebook သို့မဟုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲစာရင်းကိုင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ Zynga စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည်လိုအပ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏စုစည်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှု Zynga ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမူဝါဒများအောက်ကလျှောက်လွှာ License Agreement ကိုရရှိနိုင်ကြသည်အဖြစ် www.zynga.com မှာ။ လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ချစ်ခင်ရပါသော Wordies, ကျနော်တို့ဘာဂ်နှင့်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို updated င့်! သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဝင်းစကား May
80.17 ကို MB